Presnel Kimpembe Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiFrench Vanotamba Presnel Kimpembe Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nhoroondo Yese yeBhola Genius iyo inozivikanwa zvikuru se Kimpembe. Our Presal Kimpembe Childhood Indaba pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira panguva yehucheche kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, mamiriro emhuri, hukama hwehukama, uye mamwe akawanda OFF-Pitch chokwadi (hachizivikanwa) pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva kuti aiva chikamu chevarume ve23 Chikwata cheFrance izvo zvakakunda 2018 World Cup muRussia. Zvisinei, vashomanana chete vanofunga nezvePuppinal Kimpembe Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Presnel Kimpembe Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Presnel Kimpembe akaberekwa musi we 13th weAugust 1995 muBeumont-sur-Oise, France. Akazvarwa kuna baba vake Isaka Kimpembe uye kune Haitian amai vane zvishoma vanozivikanwa nezvazvo.
Kukura muFrance, Young Kimpembe (akafananidzirwa pakati pehama dzake mbiri dzevakuru) aifarira vabereki vake vanoita zvido zvake uye vaigara vachiita kuti ave nevana vake vaaida chaizvo mabhandi uye zvipfeko zvaaifarira zvaaigona.
Mukuwedzera, vakamupa rusununguko rwokusununguka kutevera kuda kwake kwebhola nokunyora kwaari AS Eragny mu 2002 paakanga akwegura 7. Somugumisiro, Kimpembe kufanana neyeredzi dzebhola dzebhola dzakatanga basa rake rebhora nekutsvaga mauto evechidiki.
Presnel Kimpembe Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Career Buildup
Kimpembe akapedza makore matatu AS Eragny vasati vaenda kune rimwe divi rechechi yeFrench yepamusoro yebhurani, Paris Saint-German mu2005 (pamusana pekukoka kwaPSG scouts).
Yaiva paParis Saint Germain vechidiki vechikoro kuti kusimudzira genius yebhola yakaratidza kuva yakasarudzwa kwenguva refu ye PSG mushure mokunge atanga mararamiro ake ezuva ranhasi semafambisi akadai; kunyunyuta, kuverenga kwemutambo uye kutamba.
Presnel Kimpembe Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Simuka Mukurumbira
Makore masere mushure mekunge, Kimpembe akakurudzirwa kuTPG yeboka guru mu2013 uye akaita chikwata chake chekutanga chechikwata munaOctober 2014. Kuramba kwake kuratidzira kuratidza kwakanaka mumitambo yemakirabhu uye kukwanisa kugadzirisa kuita basa kwakamuwana iye anoyemura avo vakafunga kuti akakodzera kuva nguva dzose.
Akakosha pakati peKimpembe vanoyemura vaimbova France uye mumiririri weArsenal William Gallas, uyo akamutumidza kuti "ramangwana reFrance football". Kufambira mberi kwakanyanya kusvika musi waKimpembe zvechokwadi kwakaratidza kuva yeramangwana reFrance Football nekuunganidza mazita akawanda echikwata chechikwata nekumaruwa kusanganisira Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophee des Champions uye 2018 World Cup muRussia. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Presnel Kimpembe Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Pamberi peFrench yose Mutambi wenzizi yakanaka kana Girlfriend naKimpembe nyaya haisi izvozvi. Mutambi wechivimbiso ane ngoro yakanaka inofamba nezita Sara.
Kunyange zvazvo zvishoma zvichinyatsozivikanwa nezvehukama hwavo hwakapiwa kuti Kimpembe anodawo kuchengetedza hupenyu hwake pachake pachake. Zvisinei, Sarah anouya semakumbo marefu ayo Kimpembe aizoda kuchengeta zvose zvinodhura.
Ukama hwavo hwakabereka mwanakomana uyo Kimpembe anozvikudza uye haamboregi kumuratidza pamusangano wehupfambidzani neine ruvara rwemagariro. Anotsanangura iyi iyi "Lion King" inoratidza nzira iyo shumba inotakura vana vavo.
Presnel Kimpembe Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Vabereki Vanotsigira
Kimpembe ane mhuri ine rudo inotsigira basa rake uye haambokundikani kumutsigira mutsika.
Baba vake vanogara vachitarisa vanomucherechedza achitamba kubva pamasimoni. Kuvapo Kwake kunoshanda kukuyeuchidza nyeredzi yekudiwa kwekuve pamusoro pemutambo wake.
Izvo zvinogona kutaurwa nezvaamai vaKimpembe avo vanotsanangura se:
Uyo oga asingazonditauri mhosva, iye oga wandisina mubvunzo, iye oga asina kundibvumira uye kubva kubva pamatanho angu ekutanga ❤️ Mama ❤️
Presnel Kimpembe Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Nguva Yekuita Mabasa
Kimpembe ndeye anoziva kushandisa mashandisiro ake nemabasa ekufananidzira mupfungwa. Anoita izvi kuburikidza nokutamba mitambo yemavhidhiyo uye nguva nenguva anoona mafirimu kuti awane kunyaradza kwake mberi kwemitambo inokosha.
Presnel Kimpembe Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Personality Facts
Vakawanda vanofunga kuti iye haasi iyewo mutambi wemasikirini, kanawo unyanzvi hukuru, asi munhu wese anobvumirana nebasa rake rakaoma nekutsunga
Kimpembe anoda mazano ekugadzira, zvishamisika kuti Adidas akamuisa sechiso chaAdhidas Glitch (an Inner Shoe ane maviri Outer Skins, iyo inogonesa mumwe kusanganisa michina) muParis
Vadzidzi vake vekare vaimbova mubvunzurudzo vakataura kuti kukwidziridzwa kwaKimpembe kunogona kuonekwa nekuzvininipisa kwake, nheyo dzezvose zvakanaka.
Presnel Kimpembe Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Pets
Kimpembe ane kufarira imbwa mbiri dzinonzi Letty naNala paanogara.
Kunze kwekutora mifananidzo yepakati pezvipfuwo zvake (kana shamwari dzakatendeka) Kimpembe anotorawo mifananidzo yekunze ye duo iyo yaanotumirawo mumasangano ehupfumi.
CHOKWADI CHINOGONA: Vongai nekuverenga kwedu Presnel Kimpembe Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!
Olivier Giroud Ubwana Nhau Plus Untold Biography Facts
Benjamin Pavard Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts